Howl galo boqolaal ruux lagu soo qabtay oo xalay laga sameeyay Magaalada muqdisho – STAR FM SOMALIA
Howl galo boqolaal ruux lagu soo qabtay oo xalay laga sameeyay Magaalada muqdisho
Ciidamada Ammaanka ayaa howl gallo ballaaran xalay ilaa saaka waabarigii ka sameeyay xaafado ka tirsan degmada Yaaqshiid, iyadoo howl galkan lagu qab-qabtay boqolaal ruux.
Howl galkan ayaa waxaa si wada jir ah uga qeyb qaadanayay Ciidamada Booliska, Nabadsugida iyo Booliska AMISOM, waxaana mid mid loo baarayay guryaha.
Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir C/fataax Cumar Xalane ayaa sheegay in howl galkan uu ahaa mid ay ka wada qeyb galeen ciidamada qalabka sida, iyo AMISOM.
“Howl galkan waxaa uu qeyb ka yahay howl galada amniga lagu xaqiijinayo, degmo walbana waa laga sameynayaa, 550 ruux lagu soo qabtay, markii baaritaan la marsiiyay kadib laga soo reebay 17 ruux oo uu tuhun ku jiro, iyagana waa la baarayaa”ayuu yiri Afhayeenka Gobolka Banaadir.
Inkastoo ciidamada ammaanka ay howl galo ka wadeen maalmihii u dambeeyay degmooyinka Gobolka Banaadir, hadana waxaa wali magaalada ka dhacaya dilal iyo weeraro qorsheysan.
Madaxweyne Gaas’’ Sadax Qodob Midkood in aan qaadano ayaa nagu qasbay Aqbalaada Nidaamka 4.5’’